मानवता हराएपछि ..
byShyam Rana magar - November 26, 2020
मृतक राजेशलाई उपचार खोज्दै चार अस्पताल पुर्‍याएको अस्पताल ...
पत्रकारिता सुरु गरेको साढे दुई वर्ष पत्तै नपाई बिति सकेछ । रिपोर्टिङको क्रममा धेरै ठाउँमा पुगियो । यो उपक्रममा अनेक मान्छेसँग भेट पनि भयो । अनेक घटना नजिकबाट नियालें । कतिपय मान्छे स्मृतिमा कतै बसे पनि सूचना लिने क्रममा भेटिएका धेरै जसो सूचनादाता सम्झनामा छैनन् । कतिपय घटनाले दिमागै हल्लाएका पनि छन् । मलाई मात्रै होइन ति घटना देश, विदेश सबैतिर पनि चासोको विषय बनेका थिए ।
आज रिपोर्टिङको क्रमा पनि यस्तै एउटा घटनासँग साक्षात्कार हुन पुगें । देशकै ठूला सहरको अग्रपंक्तिमा आउने पोखरामा अस्पतालले भर्ना लिन नमान्दा अन्नपूर्ण गाउँपालिका ३ काँडेका एक बिरामीको ज्यान गएछ । बुधबार बेलुकीसम्म स्वास्थ्य अवस्था राम्रै रहेका ति बिरामीलाई एक्कासी श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि अस्पताल लगियो । अकालमै ज्यान गुमाउने ति दुखी पात्र ललीतपुर स्थायी ठेगाना भएका राजेश कार्की रहेछन् । पेशाले ड्राइभर राजेश बुधबार बेलुकी नवलपुरदेखि ट्रक चलाएर आई पुगेका रहेछन् । उनका आफन्तजनका अनुसार उनमा स्वास्थ्य सम्बन्धि कुनै समस्या थिएन । राजेश दीर्घ रोगी थिएनन् । कोरोना संक्रमण भएको आशंकामै अस्पतालले भर्ना लिन नमानेको उनीहरुको अनुमान थियो ।
सुरुमा मेट्रोसिटी असप्तालमा पु¥याइयो । त्यहाँ भर्ना लिन नमानेपछि लेकसिटी, त्यसपछि फेवासिटी हुँदै अन्तिममा मनीपाल अस्पतालसम्म पुग्दा राजेशले मृत्युसँग लामो लडाई लडें । बिडम्बना ! लडाई हारे ।
कम्तिमा भेन्टिलेटरको मात्रै सहारा पाएको भए पनि राजेशले यो लडाई जित्थे होला । हस्पिटलले यो मानवीयता सम्झिएको भए अझैं केही समय उनी मैदानमा जरुर रहन्थे । परिवारको बिलौना मनीपाल अस्पतालको लागि नौलो होइन । यस्ता, क््रmन्दन उसले सुनि रहन्छ । उसलाई बानी परेको छ ।
ल, ठिक छ ।
हामीले मान्यौ, राजेश कोरोना संक्रमित थिए । कोरोना संक्रमित हो भन्दैमा भर्नै नलिने ? यो कहाँको मानवीयता हो यार ! तपाईहरुले नै भनेको होइन, कोरोना विरुद्धको लडाई सँगै लड्ने हो । सजगता अपनाए कोरोना केही होइन भनेर । यदी त्यसो हो भने किन यति बिघ्न त्रास ? आखिर, जितिन्छ नै भने । केही समय अघि पनि स्याङ्जाकी एक जना बिरामीको अस्पताल चहार्दा चहार्दै ज्यान गएको थियो । फेरि, उस्तै घटना दोहोरिदासम्म पनि सरकार भेटिएन । ९ महिना अघि कोरोनासँग लड्ने सबै तयारी पूरा गरेको सरकार कहाँ छ ? पूरा नै नभएको भए यो अफवाह किन फैलाएको होला । हामीले सक्दैनौं भनिदिएको भए त बाँच्ने आशमा यसरी अस्पताल दौडिनु पदैनथ्यो होला । कमसेकम लामो दुरिको रेशमा सरिक हुन त पदैैन्थ्यो होला नि !
मैले सरोकारवाला निकायलाई पनि सम्पर्क पनि गरें । घटनाबारे सोधें । उहाँहरुलाई त थाहै रहेनछ । अलि अस्ति मुख्यमन्त्री ज्यु ले बिरामी भर्ना लिन नमान्ने अस्पताललाई कारबाही गर्छु भन्नु भएको थियो । खै त कारबाही ? यसरी नै अनाहकमै सर्वसाधारणले कतिञ्जेल ज्यान गुमाउनुपर्ने हो ?
जवाफ चाहियो सरकार, ...